Iindaba-Izinto zokubhala Zibeka iZipho zaBantwana
Izinto zokubhala iseti sisibizo sobuninzi esibhekisa kwizixhobo ezisongelweyo zorhwebo, kubandakanya iphepha elisikiweyo, iimvulophu, izixhobo zokubhala, iphepha eliqhubekayo lefomu, kunye nezinye izinto zeofisi. Iya kuba lixesha lesikolo elitsha lonyaka ozayo kaSeptemba. Ngaba uzilungiselele iiseti zokubhala zabantwana bakho? Ngaba usafuna iiseti zokubhala ezikhethekileyo ezinencasa yabantwana? Ungaze ujonge phambili kodwa ezona zikhethekileyo zethu zintsha- iiTiger Sets ezincinci, ayisosipho sigqibeleleyo sabantwana, kodwa iya kukwenza ume ngaphandle kwintengiso.
Uncedo lwezi ndawo zokubhala zikhethekileyo zabantwana zezi zilandelayo:
1. Izinto zokubhala ze-6pcs ezibekwe kwityesi yeplastiki yokuhamba kunye umtsalane
2. Faka uphawu loyilo oluhle oluthandwayo ngabantwana
3. Isimahla yokubumba kunye nokuprinta ukuseta umrhumo woyilo esele lukhona
4. Umgangatho ophezulu, zonke izinto azinetyhefu kwaye azinavumba
5. Ukuthobela i-EN71, REACH, CPSIA kunye ne-ASTM esemgangathweni wovavanyo
6. Isipho esigqibeleleyo sesikolo, ikhaya, usuku lokuzalwa, itheko okanye ezinye izihlandlo
7. Unako ukwenza ngokwakho njengesicelo sakho
8. Sinokubonelela ngeesampulu zasimahla ukuba ujonge umgangatho
9. Akukho MOQ ngexabiso lokhuphiswano, ixesha lokuhambisa ngokukhawuleza
Kananjalo iya kuba lutshintsho olukhulu ekuphuhliseni umgca wemveliso omtsha kunye neeseti zokubhala ngexesha lesikolo esishushu. Ngaphandle koyilo oluvulekileyo olukhoyo, uyilo lwesiko lwamkelekile. Ngaphezulu kweefektri ezi-3 kunye nabasebenzi abangama-2500, kwaye njengeDisney evunyiweyo, iMcDonald's, iCoca-Cola kunye ne-NBC Universal umenzi, Izipho eziMnandi ziyazibophelela ekuveliseni iiseti zezinto zokubhala ezintsha kubandakanya iipensile, irula, irabha, isilola, iintlobo ezahlukeneyo zeepensile yabantwana. Ukhuseleko, izinto ezintsha, umgangatho ophezulu ziinjongo zethu.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga neeseti zezipho zezinto zokubhala zabantwana okanye nantoni na esinokuyenza kuwe, nceda uzive ukhululekile ukunxibelelana nathi ku sales@sjjgifts.com.